शैक्षिकथलोमा राजनीति - Pradesh Today शैक्षिकथलोमा राजनीति - Pradesh Today
असार ०६, २०७६ सम्पादकीय
राजनीति सबै क्षेत्रमा छ । कुन क्षेत्रमा कति र कसरी राजनीति हुन्छ ? भन्ने मात्रै हो । पछिल्लो समयमा सबैभन्दा बढी शिक्षा क्षेत्रमा राजनीति हावी देखिएको छ । स्कुल क्याम्पसलगायतका स्थानमा समेत बढी राजनीति चलखेल भइरहेको देखिन्छ ।
सबैभन्दा बढी शिक्षकहरुमा राजनीति देखिने गरेको छ । शिक्षकहरुकै राजनीतिका कारण धेरै शिक्षण संस्थाहरुमा शैक्षिक सुधार हुन सकेको छैन ।
शिक्षकहरु र शिक्षा सरोकारवालाहरुमा बढेको राजनीति संस्कार र राजनीतिक पार्टीहरुले शिक्षण संस्थाहरुमा बनाउने राजनीतिक थलोले समस्या निकालिरहेको छ ।
यही कारण पछिल्लो समय शिक्षामा घुसेको राजनीति संस्कार र आचरणले शिक्षा क्षेत्र बिग्रिर्दै गएको देखिन्छ । सामुदायिक क्याम्पसको रूपमा रहेको दाङको राप्ती बबई क्याम्पस दाङमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको गुनासो शिक्षा सरोकारवालाले गरेका छन् ।
क्याम्पसले शैक्षिक सुधारका लागि गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले राजनीतिक प्रभाव शुन्य पार्नु सुझावले पनि शिक्षण संस्थाहरुमा राजनीति हावी भएको देखिन्छ ।
पश्चिम दाङको सामुदायिक क्याम्पसको रुपमा चिनिएको राप्ती बबई क्याम्पसमा राजनीतिक चलखेल बढ्दा शैक्षिक सुधार हुन नसकेको गुनासो आउनु राम्रो हैन ।
समुदायस्तरमा राम्रो छवि बनाएको क्याम्पसमा सुरुदेखिकै राजनीति प्रभावले केही न केही समस्या त बनाएको नै छ । शैक्षिक क्षेत्र सुधारका लागि सबैभन्दा पहिले राजनीतिक प्रभाव रोक्नुपर्ने र प्रवेश नहुने वातावारण निर्माण गर्नुपर्छ ।
क्याम्पसको राजनीतिक प्रभावको विषयमा आएको सरोकारवालाको गुनासोलाई राजनीतिक दलहरुले पनि सम्मान गरेर समस्या हटाउन सक्नुपर्छ ।
राजनीतिक चलखेल बन्द गरेर शैक्षिक चलखेल बढाउन आवश्यक छ । केही समय यता क्याम्पसमा राजनैतिक चलखेल बढेका कारण क्याम्पस प्रसासन र सञ्चालन समितिलाईसमेत काम गर्न समस्या भएको देखिन्छ ।
राजनीतिक हस्तक्षेप र चहलपहल बढ्नुले शैक्षिक विकास गर्दैन । क्याम्पसलाई राजनीतिक थलो हैन शैक्षिकथलो बनाउनतर्फ नेताहरूले सोच्ने की ?
शिक्षा सर्वश्रेष्ठ हुन्छ । शिक्षा आर्जनका लागि शिक्षाकै वातावरण निर्माण हुनुपर्छ । त्यो वातावारणका लागि शैक्षिकथलोमा राजनीतिक चलखेल बन्द हुनुपर्छ ।
राजनीतिक चलखेल गरेर शिक्षा आर्जनमा लागेका बालबालिका, किशोर, किशोरीको यात्रालाई अवरोध बनाउनेतर्फ जानु हँुदैन । राजनीति गर्ने विभिन्न क्षेत्र छन्, विषय छन् ।
त्यहाँ गएर गरौं राजनीतिक चलखेलकै कारण शैक्षिक संस्थाहरुमा आउने समस्या आजैदेखि समाधान गरौं ।
न्याय खोज्दै श्रीमती पीडित पुरूष